Yini imvamisa ye-Ideal Text Messaging? | Martech Zone
NgeSonto, ngoJuni 17, i-2018 NgeSonto, ngoJuni 17, i-2018 Douglas Karr
Cishe asikho isiteshi sokumaketha esiqonde ngqo futhi esinokuhlengwa okungcono nomthelela wokuphendula kunokuthumela imiyalezo (i-SMS). Inkampani engabanaki ababhalisile bayo be-SMS izobona ukuthi iklabhu yabo yombhalo iyancipha futhi ingenisa imali nayo. Ngakolunye uhlangothi lobubanzi, ukuqhumisa amakhasimende ngemiyalezo kungenzeka kuwacasule futhi kungahle kube nomphumela wokungabhalisi okuningi.
Imininingwane ye-infographic yokumaketha okuhle kwe-SMS futhi inikezela ukuqonda ngokuziphatha kwababhalisile, kufaka phakathi:
Ungalinganisa kanjani ngokufanele inani lempilo yombhalisi we-SMS.
Ungayithola kanjani kahle imvume yokumaketha nge-SMS ohlwini lwakho lwababhalisile.
Ungacwaninga kanjani ukuthi ababhalisile bombhalo bafuna nokuthi bafuna kangaki.
Ungawasungula kanjani amamethrikhi asemqoka futhi ulinganise ngokunembile imiphumela yakho.
Wonke umkhangisi osuselwa kwimvume kufanele alinganise imvamisa yawo yemiyalezo, ivolumu yonke, nokunikezwayo ukuqinisekisa ukuthi banikeza inani kumathemba. Uma ungathanda ukuqonda okuthile ekwakheni imikhankaso yokukhangisa ye-SMS esebenzayo, sinenye indatshana ku- Izinto eziyisi-6 ezibalulekile zokumaketha kwemiyalezo ebhaliwe.
Ngokuthumela imiyalezo nge-SMS, lokhu kungabaluleka kakhulu kunanoma iyiphi enye indlela enikezwe ukuthi obhalisile unikeza imvume yokuyifinyelela mathupha. INeon SMS, inkampani yokumaketha umbhalo ngobuningi e-Ireland, yathuthukisa le infographic - Ungayithola Kanjani Ibhalansi Ngokufanele Ekukhangisweni Kwe-SMS ukuhlinzeka ngamathiphu, izibalo, namasu wokusebenzisa isu lakho lokuthumela imiyalezo.
I-2018: Izinkampani Nabathengi Bayisebenzisa Kanjani Imidiya Yezokuxhumana